राजदूतले बोलाउँदा जानै हुँदैन भन्ने छ र ! « Daily News Bank
राजदूतले बोलाउँदा जानै हुँदैन भन्ने छ र !
काठमाडौं,७ साउन । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले राजनीतिक भेटघाट र सक्रियता तीव्र पारेका छन् । सरकारको लोकप्रियता खस्किइरको र सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएका बेला राजदूत पूरीले सत्तारूढ र विपक्षीदलका महिला सांसदलाई लैनचौरमै बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार दूतावासले आयोजना गरेको भेटवार्तामा सत्तारूढ दलकी सांसद नवीना लामा, कोमल वली, गंगा सत्गौवा सहभागी थिए । कांग्रेस उपाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सचेतक पुष्पा भुसाल, पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादव, सांसद मीना पाण्डे पनि भेटवार्तामा सहभागी थिए । राजदूत पुरीले संसदमा महिलाको भूमिका, अधिकारको उपयोगको बारेमा बुझेको छलफलमा सहभागी सत्तारूढ दलकी सांसद लामाले जानकारी दिइन् ।
उनले छिमेकी देशको राजदूतले बोलाउँदा निम्तो अस्वीकार गर्न नसकेर गएको र राजनीतिक कुराकानीमा भने सहभागी नरहेको बताइन् । अपराह्न ४ बजेका लागि निम्तो आएको भए पनि आफू पुग्दा ५ बजेको र एकछिन बसेर फर्किएको उनको प्रष्टीकरण छ । “कुराकानी गर्न भाषागत समस्या पर्‍यो । न अंग्रेजीमा पोख्त छु, न हिन्दी नै राम्रो छ । तसर्थ कुराकानी हुन सकेन । त्यै पनि म ढिला पुगेको थिएँ । चिया खाएर फर्किएँ,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् ।
कूटनीतिक भेटघाट र छलफलमा जानु अस्वभाविक नभएको र जानै नहुने भनेर पार्टीको विधानमा, संसदीय परम्परामा नरहेको बताउँदै यसमा अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो ।